Izindaba - Abathengisi be-SHWHWA Bulldozer Sebebuyile Kulomqedazwe
Kusukela ekuqaleni kuka-2021, ukuthengisa kuka-SHEHWA ngogandaganda kugcina kubhekene nobunzima obuningi: ukuvuselelwa kwe-COVID-19, ukwazisa okuqhubekayo kwezinga lokushintshaniswa kwe-RMB, ukuncipha kwezimakethe zangaphandle, ukushoda kwezingxenye zokungcebeleka zasekhaya, njalonjalo.
Lapho ubhekene nobunzima obuningi, uMnyango Wamazwe Ngamazwe we-SHEHWA ugcina ukuqinisa isikhangiso senethiwekhi nge-e-commerce, uzama ukuthuthukisa amakhasimende amasha, Ngaphakathi, ukugcina oxhumana nabo abasondelene namakhasimende amadala nokunaka ukubasiza ukuxazulula zonke izinkinga ngesikhathi sokubambisana , ikakhulukazi kumakhasimende ajwayelekile njenge-ejenti yaseRussia. Ngasikhathi sinye, uMnyango Wamazwe Omhlaba ubulokhu ubambisana neSinosure usiza amaklayenti aphesheya kwezilwandle ukuxazulula ubunzima bezezimali
Ngemizamo engapheli, ibhizinisi laphesheya kwezilwandle loMnyango Wamazwe Omhlaba lisazuze intuthuko enkulu ngesikhathi sobhadane: amaqoqo ama-bulldozer athengiswa emakethe yaseRussia, abasebenzeli base-Ukraine nase-Argentina nabo basayine ama-oda amasha ngokulandelana, namakhasimende amasha eTunisia, Algeria nakwamanye amazwe athuthukiswa.
Ngokuthunyelwa kwamaqoqo ezimpahla, ukuthengiswa kwemakethe yaphesheya kwe-SHEHWA kufinyelele ezingeni elisha. UMnyango Wamazwe Omhlaba uzoqhubeka nokuxazulula bonke ubunzima futhi wenze imizamo eqhubekayo yokufeza izinhloso ezinkulu nezinamandla.